Public Health in Myanmar: October 2009
ပြီးခဲ့တဲ့ Anti-smoking ads ဆိုတဲ့ ပို့စ်ကို မှန်ကန်မှု ရှိလား မရှိလား အရင် မစုံစမ်းဘဲ ပို့စ်ကို အရင်တင်ခဲ့မိတယ်။
တင်ပြီးမှ စိတ်ထဲမှာ မကျေနပ်ဖြစ်လွန်းလို့ လိုက်စုံစမ်းတော့ အဲဒီ တန်ပြန်ကြော်ငြာတွေက အစစ်အမှန်မဟုတ်ဘဲ တမင် သရော်ပြီး လုပ်ထားတဲ့ နေရာက လာတာလို့ သိရတယ်။
The onion ဆိုတဲ့ website က သတင်းတွေ၊ ပညာပေးကြော်ငြာတွေကို လှောင်ပြောင်ပြီး အတည်လိုလိုနဲ့ တင်နေတဲ့ နေရာဆိုတာကို ဒီနေ့မှ သိလိုက်ရတယ်။
သူက ယုံကြည်စိတ်ချရတဲ့ အမေရိကန် နိုင်ငံက စီဒီစီ နာမည်ကို သုံးပြီး အတည်နဲ့ လုပ်ထားတဲ့ ကြော်ငြာ ဖြစ်တာရယ်၊ အတန်းထဲမှာ ပြဖြစ်သွားတာရယ်ကြောင့် ကျွန်မက အတည်လို့ ယူဆလိုက်မိတယ်။
သူတို့ နိုင်ငံက သူတွေကတော့ the onion website ကို သိပြီးသား ဖြစ်နေတာလား၊ ဒါမှ မဟုတ် သူတို့ ကိုယ်တိုင် မသိတာလား ဆိုတာကိုတော့ နောက်တစ်ပတ် အတန်းချိန်ကျမှပဲ မေးလို့ရပါလိမ့်မယ်။
ဆရာက ကိစ္စရှိလို့ ထွက်သွားခါနီးမှာ ကျောင်းသူ တစ်ဦးက ပြလိုက်တာကြောင့် ထင်ယောင်ထင်မှား ဖြစ်စရာတွေ ဖြစ်သွားခဲ့တာပါ။
အဲဒီပို့စ်တစ်ခုလုံး သုံးလို့ မရတော့ပေမယ့် ဘာတွေေ ရးခဲ့မိတယ် ဆိုတာ ကိုယ့်ဖာသာကိုယ် မှတ်မှတ်သားသား ရှိအောင် ဆက်ထားရမလား၊ အဲဒီပို့စ်ကိုပဲ ဖတ်မိတဲ့ သူတွေက အတည်လို့ ထင်မှာ စိုးလို့ ဖျက်ပစ်လိုက်ရမလားလို့ စဉ်းစားလို့ မရတာနဲ့ တခြား admin တစ်ဦးကို လှမ်းတိုင်ပင်အပြီးမှာ ပြန်ဖြုတ်ပစ်ဖို့ ဆုံးဖြတ်လိုက်တာပါ။
ကျွန်မ အတွက် အလွန်ကို ကြီးမားတဲ့ သင်ခန်းစာပါပဲ။
နောက်ကို အတည်ပြုနိုင်တဲ့ ယုံကြည်စိတ်ချရတဲ့ နေရာတွေကို သေသေချာချာ မတွေ့ရဘဲ ပြောဖို့ ရေးဖို့ တော်တော်ကို ခက်သွားပါပြီ။
ကိုယ့်ရဲ့ ယုံကြည်စိတ်ချရမှုကိုလဲ ကိုယ်တိုင် ပြန်စစ်ဆေးမိပါတယ်။
မဖျက်ခင်က ဖတ်မိသွားတဲ့ သူတွေ အားလုံးကိုလဲ ဒီပို့စ်နဲ့ တောင်းပန်ပါတယ်။
ဆရာဝန်တွေကို တီဘီရောဂါ ရှာဖွေစမ်းသပ်မှုနဲ့ ကုသရေးကို အရင်ကလို သင်ပေးခြင်းမရှိတာကို World Medical Association (WMA) ကမ္ဘာ့ဆေးပညာအသင်းက စိုးရိမ်တယ်လို့ ၁၆-၁၀-၀၉ နေ့က ပြောလိုက်ပါသတဲ့။ ဒါ့ကြောင့် (အွန်လိုင်း) ကနေ မွမ်းမံသင်တန်းပေးမယ်လို့လဲ ဆိုပါတယ်။
ဒီသင်တန်းမှာ တီဘီရောဂါရဲ့ အခြေခံ သတင်း အချက်အလက်တွေ၊ နောက်ဆုံးပေါ် ရောဂါရှာဖွေနည်းတွေ၊ ဘယ်လို ကုသရမယ်၊ နောက်ပြီး ဆေးပေါင်းစုံ ခံနိုင်ရည်ရှိတဲ့ တီဘီ အကြောင်းအရာတွေ ပါမယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ နောက်တခါ လူနာတွေအဘို့ ဆေးကုသမှုအပေါ်မှာ စဉ်ဆက်မပြတ် လိုက်နာနေဘို့နဲ့၊ နေရာဒေသမရွေး အသုံးချနိုင်အောင် တကမ္ဘာလုံး ခြုံ့ကြည့်တတ်ဘို့ ဆိုတာတွေလည်း ပါပါအုံးမယ်။
၂၀၀၆ ခုနှစ်မှာ Multidrug-resistant tuberculosis (MDR-TB) ဆေးပေါင်းစုံ ခံနိုင်ရည်ရှိတဲ့ တီဘီ အကြောင်းကို (အွန်လိုင်း) ကနေစလုပ်ခဲ့တုံးက ဆရာဝန်တွေဟာ တီဘီရောဂါရဲ့ အခြေခံ အချက်အလက်တွေကို မေ့နေကြတာကို သိလာရတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ ကမ္ဘာပေါ်က နေရာ အတော်များများမှာ ဒီရောဂါက ပပျောက်သွားပြီမို့ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်တဲ့ နိုင်ငံတွေမှာ တီဘီလူနာဆိုတာကို ဆရာဝန်တွေ မြင်တောင် မမြင်ဘူးကြတော့ဘူး။ ဒါ့ကြောင့်လဲ တီဘီရောဂါ ရှာဖွေ စမ်းသပ်တာ နဲ့ ကုသရေးကို သင်ပေးစရာ မလိုတာမျိုး ဖြစ်သွားရပါသတဲ့။
အခုတော့ တီဘီဟာ ခေါင်းပြန်ထောင်လာတာမို့ တကမ္ဘာလုံးက ဆရာဝန်မှန်သမျှ တီဘီကို အခြေခံကအစ သိထားဘို့ လိုတာမို့ (အွန်လိုင်း) မွမ်းမံသင်တန်းဟာ တီဘီအဖြစ်များတဲ့ ဖွံ့ဖြိုးဆဲတိုင်းပြည်တွေမှာ အတော်အသုံးဝင်ပါလိမ့်မယ်။
သင်ရိုးညွှန်းတမ်းကို ကမ္ဘာ့ဆေးပညာအသင်းအတွက် New Jersey Medical School Global Tuberculosis Institute, USA ကနေ ရေးသားပြုစုတာပါ။ တီဘီကို “အတိတ်ကဝေဒနာ” လို့တောင် ထင်ထားကြပါတယ်။ တကယ်တော့ တနေ့ တနေ့ လူပေါင်း ၄၅၀၀ ဟာ တီဘီကြောင့် သေနေကြရတာပါ။ သေရသူတွေကလည်း အလုပ် လုပ်နိုင်တဲ့ အရွယ် ၁၅ နှစ် ကနေ ၅၄ နှစ်အရွယ်တွေ ဖြစ်ပါတယ်။ လူ ၉ သန်းဟာ တီဘီဖြစ်လာနေပြီး၊ နှစ်တိုင်း ၂ သန်းဟာ တီဘီကြောင့် သေရတယ်။ တကမ္ဘာလုံးဆိုရင် လူပေါင်း ၂ ဘီလျံဟာ တီဘီဝေဒနာသယ်တွေပါ။ HIV ရှိသူတွေရဲ့ ၇၅%ဟာ တီဘီ ရှိနေကြပါတယ်။
သင်တန်းသစ်ဟာ တကမ္ဘာလုံးက လက်ခံ ကျင့်သုံးနေတဲ့ တီဘီကို ဘယ်လို ထိန်းမလဲဆိုတဲ့ နိုင်ငံတကာ ဗျူဟာနဲ့ လိုက်လျော ညီထွေ ဖြစ်ပါတယ်။ ကမ္ဘာ့ဆေးပညာအသင်းက လွန်ခဲတဲ့ ၂ နှစ်ကတည်းက ပေးနေတဲ့ ဆေးပေါင်းစုံပြီးတဲ့ တီဘီ အစီအစဉ်နဲ့ပါ ဆက်နေပါမယ်။ အစိုးရဌာနဆရာဝန်ဖြစ်ဖြစ် အလွတ်ဆရာဝန်ဖြစ်ဖြစ်ကို အခမဲ့ပေးမဲ့ သင်တန်း ဖြစ်ပါတယ်။ သင်တန်းပြီးထားရင် (ခရက်ဒစ်)ဆိုတဲ့ ဆရာဝန်ရဲ့ပညာ-အတွေ့အကြုံ မှတ်တမ်းမှာ အမှတ်ရပါမယ်။ ဒါဟာ စဉ်ဆက်မပြတ် ဆေးပညာ သင်ယူရေး အစီအစဉ် Continuing medical education programme အရ ဖြစ်ပါတယ်။ အင်္ဂလိပ် ဘာသာအပြင် ပြင်သစ်၊ စပိန်၊ တရုပ်နဲ့ ရုရှားလိုပါ သင်ပေးမှာပါ။
ဒီပညာသင်အစီအစဉ်ကို Lilly MDR-TB Partnership ကနေ တီဘီထိန်းချုပ်ရေးအတွက် Global Plan to Stop TB 2006-15 ကို အထောက်အကူပေးတဲ့အနေနဲ့ ကန့်သတ်မှုမရှိ ငွေကြေး အထောက်အပံ့ ပေးမှာပါ။ ဒီလိုလုပ်နေတာဟာ တကမ္ဘာလုံးက ဖွံ့ဖြိုးရေး အဖွဲ့အစည်းနဲ့၊ အတတ်ပညာသင် (အင်စတီကျု) ပေါင်း ၂၀ ကနေ ဆောင်ရွက်နေတာ ဖြစ်ပါတယ်။
Labels: Medical Education, TB
အစာအိမ်နာနဲ့ပတ်သတ်ပြီး ရှေးရိုး အစဉ်အဆက်က သိထားနှင့်ပြီးသား အချက်တွေရှိပေမယ့် ဆေးဘက်ဆိုင်ရာ အတွေး အမြင်သစ်တွေကို ဖတ်မိတဲ့အခါ စိတ်ဝင်စားစရာမို့ စပ်မိစပ်ရာလေးတွေ ရေးဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။
စိတ်ဖိစီးမှုဟာ ရောဂါအတော်များများကို ဖြစ်စေတယ်လို့ ရှေးယခင်နှစ်ပေါင်းများစွာ ကတည်းက ယူဆခဲ့ကြပါတယ်။ San Francisco မှာရှိတဲ့ California တက္ကသိုလ် အစာအိမ်နှင့်အူလမ်းကြောင်း ဆိုင်ရာ ဌာန လက်ထောက် ပါမောက္ခ ဒေါက်တာ mathy က စိတ်ဖိစီးမှုဟာ ကျန်းမာရေးစနစ်မှာ အဓိကကျတဲ့အခန်းကဏ္ဍက ပါဝင်ပေမယ့် အစာအိမ်နာဖြစ်စေဖို့ ဒါမှမဟုတ် ပျောက်ကင်းစေဖို့ကိုတော့ သိပ်မစွမ်းဆောင်နိုင်လှပါဘူးလို့ ဆိုပါတယ်။
အပူအစပ်တွေစားပြီးတဲ့အခါ ရင်ပူ၊ ရင်ခေါင်းအောင့်တတ်တဲ့ အတွေ့အကြုံတွေ ရှိပေမယ့်လည်း spice ကို capsaicin ဆိုတဲ့ငရုတ်ကောင်းတမျိုးမှရတဲ့ ဓါတ်တမျိုးမှတဆင့် ထုတ်လုပ်ထားတာဖြစ်ပြီး အဲဒီငရုတ်ကောင်းဟာ အစာအိမ်နာကိုမဖြစ် စေပါဘူး။ ဒေါက်တာ Mathy ကတော့ တချို့သောအစားအစာတွေဟာ အစာအိမ်နာမဖြစ်စေပေမယ့် အစာအိမ်နာရှိနေတဲ့သူကို ဝေဒနာပိုဆိုးအောင်စွမ်းဆောင်နိုင်တယ်လို့ ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့အချက်ကတော့ စင်္ကာပူနိုင်ငံမှာ ပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ သုတေသနတစ်ခုအရ capsaicin ပါဝင်မှုနည်းတဲ့ တရုတ် အစားအစာကို စားသုံး သူတွေမှာ အိန္တိယ၊ မလေးအစားအစာ စတဲ့ အပူအစပ်စာ စားတဲ့သူတွေထက် အစာအိမ်နာဖြစ်ပွားမှုသုံးဆ ပိုတာကို တွေ့ရတာပါဘဲ။ သုတေသီတွေကတော့ capsaicin ဟာ အစာအိမ်မှာရှိတဲ့ အာရုံကြောတွေကို လှုံ့ဆော်ပြီး အစာအိမ်နာကို ကာကွယ်ပေးတဲ့ ဓာတုပစ္စည်းများ ထုတ်ပေးတယ်လို့ယူဆကြပါတယ်။ အဲဒီလိုပါပဲ capsaicin အစာအိမ်မှာရှိတဲ့ အက်ဆစ် ပမာဏကို ပြောင်းလဲစေပြီး အစာအိမ်နာကို ဖြစ်စေတဲ့ Helicobacter pylori ကိုသေစေတယ်လို့လည်း ယူဆကြပြန်ပါတယ်။
အပူအစပ်တွေဟာ အစာအိမ်နာဖြစ်တယ်လို့ လူအတော်များများ ယုံကြည်ကြသလိုပဲ နွားနို့သောက်ခြင်းဟာလည်း အစာအိမ်နာကို ပျောက်ကင်းစေတယ်လို့ ယူဆတာတွေရှိပါတယ်။ အခုနောက်ဆုံး အယူအဆကတော့ နွားနို့ဟာ အစာအိမ်နာကို ပျောက်ကင်းစေတာ မဟုတ်ပဲ သက်သာရုံသက်သာ စေတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ ဒီအကြောင်းအရာနဲ့ပတ်သတ်ပြီး ဒေါက်တာ Mathy က နွားနို့သောက်သုံးခြင်းဟာ အစာအိမ်ကို တံတိုင်းတစ်ခုလို အလွှာတစ်ထပ်နဲ့ ကာရံပေးပေမယ့်လည်း အစာအိမ်နာကို ပျောက်ကင်းအောင်တော့ မစွမ်းဆောင်နိုင်ပါဘူးလို့ ဆိုထားပါတယ်။
အဲဒီအပြင် Los Angeles, California တက္ကသိုလ် ပါမောက္ခ ဒေါက်တာ Weinstein က လည်း လူဦးရေရဲ့ ၆၅%ဟာ lactose နဲ့ မတည့်တတ်ကြပြီး အဲဒီလိုဓါတ်မတည့်ခြင်းဟာ အသက်ရလာတာနဲ့အမျှ များလာတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ ဒါကြောင့် အစာအိမ်နာကို ပျောက်ကင်းအောင် နွားနို့သက်သက်ချည်း သောက်သုံးတာဟာ သင့်လျှော်တဲ့နည်းလမ်း မဟုတ်ဘူးလို့လည်း ဆိုထားပါတယ်။
ဒေါက်တာ Mathy ရဲ့ ရှင်းလင်းချက်အရ ခန္ဓာကိုယ်တွင်းရှိ အချို့သော အကျိုးပြုဘက်တီးရီးယားများဟာ လေထခြင်း၊ လေပွခြင်းတို့ကို သက်သာစေတယ်ဆိုပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အဲဒီဘက်တီးရီးယားတွေဟာ အစာအိမ်နာကို ပျောက်ကင်းစေဖို့အထိတော့ ကြာရှည်မနေနိုင်ကြဘူးလို့ ဆိုပါတယ်။
အစာအိမ်နာနှင့် အရက်၊ အစာအိမ်နာနှင့် caffeine ဓါတ်
အရက်သေစာကို အလွန်အကျွံသောက်သုံးခြင်းကလည်း အစာအိမ်နာဖြစ်ပွားမှုကို ဦးတည်စေပါတယ်။ အဲဒီအပြင် အရက်ကို အလွန်အကျွံသောက်သုံးခြင်းက အစာအိမ်နာရဲ့ နောက်ဆက်တဲ့ ဆိုးကျိုးတွေဖြစ်တဲ့ သွေးယိုခြင်းကိုလည်း ဖြစ်စေပါတယ်။
Caffeine ဓါတ်ဟာ အစာအိမ်ရဲ့ အက်ဆစ် ထုတ်လုပ်မှုပမာဏကိုများပြားစေတာကြောင့် caffeine ဓါတ်ပါတဲ့ ကော်ဖီ၊ ကိုလာကိုလာ အများအပြား သောက်သုံးသူတွေမှာ ပြသနာဖြစ်ပွားနိုင်တာမို့ အလွန်အကျွံသောက်သုံးမှုမှ ရှောင်ကျဉ်သင့်တယ်လို့ DR Weinstein က ဆိုပါတယ်။
Eleanor Roberts P. Ulcer Myths and Facts
Eating spicy foods does not cause an ulcer, and neither milk nor probiotics can heal them: everyday health; 2009 [updated 8.12.209; cited 2009]. ကို သင့်လျှော်သလို ဘာသာပြန်ပါသည်။
လောကအလှ အွန်လိုင်း မဂ္ဂဇင်း
၂၀၀၉ ခုနှစ် အောက်တိုဘာလ ၁၀ ရက်
Labels: Gastrointestinal system, Health behavior, Non-communicable disease
အိမ်အ၀င်မှာ “ကြိုဆိုပါ၏” စာတမ်းလေးချိတ်ထားတာ မင်္ဂလာရှိလှပါတယ်။ ဆေးရုံလို၊ လူအိုရုံလို၊ နေရာမှာ (၀ဲလ်-ကမ်း) ဆိုတာ ရေးထားရင်တော့ တမျိုးကြီး မဟုတ်ပါလား။
နိုင်ငံကြီးများက မြို့ကြီးများရဲ့ ပုဂ္ဂလိကဆေးရုံကြီးတွေမှာ ရောဂါရှာဖွေတာ နဲ့ ဆေးကုသတာတွေမှာ မြန်လဲမြန်၊ စိတ်လဲ ချရတဲ့ ခေတ်ရှေ့ပြေး ကရိယာတန်းဆာပလာ မှန်သမျှ တပ်ဆင်ထားကြပါပြီ။ နည်းပညာအရသာမက လူနာတွေ သက်တောင့် သက်သာ ကိုယ့်အိမ်မှာကိုယ် ရှိနေသလို ခံစားစေရပြီး၊ ရောဂါပျောက်လည်း မြန်ဆန်အောင် စီမံလာထား နေကြပါပြီ။
ခွဲစိတ်ကုသပြီးတဲ့ လူနာတယောက်ရဲ့ အရေးကြီးလက္ခဏာတွေဖြစ်တဲ့ သွေးဖိအား၊ နှလုံးခုန်နှုန်း၊ အသက်ရှူနှုန်း တွေကို ဆရာဝန်က Wireless telemetry ခေါ်တဲ့ အဝေးကနေ ထိန်းကြည်နိုင်တဲ့ စနစ်နဲ့ စောင့်ကြည့် နိုင်ပါတယ်။ အထူးကု ဆရာဝန်တဦးအဖို့ အထူးခန်း ICU ထဲကလူနာရဲ့ အခြေအနေကို ဖုန်းခဏခဏ ဆက်မေးနေစရာ မလိုပါ။ အဲဒီ Telemetry ဆိုတာဟာ ခေတ်ရှေ့ပြေးနည်းပညာ တိုးတက်မှုတွေထဲက တခုဘဲ ရှိပါသေးတယ်။
ဆေးရုံတွေက လူနာ သက်တောင့်သက်သာရှိပြီး အစစအဆင်ပြေစေအောင် အဆက်မပြတ် ဆောင်ရွက် လာကြပါတယ်။ ဆေးရုံးကြီးတွေမှာ စာရွက် မသုံးတော့သလို၊ လူနာတွေကလည်း စာရွက်စာတမ်း၊ ဖလင်ပြား၊ ရီပို့တ်တွေ သယ်လာဘို့ မလိုတော့ပါ။ သူ့ (အိုင်ဒီ)နံပါတ်သာ မှတ်ထားရင် ရပြီ။ ဆေးရုံက အင်တာနက်မှာ အားလုံးကို သိုမှီး သိမ်းဆီးထားပါတယ်။ နောက်ပြီး ဆရာဝန်ကညွှန်းတဲ့ ဆေးဝါးကိုလဲ (ဖါမဆီ-နက်တ်ဝပ်ခ်)ကို တခါတည်း ပို့လိုက်တာမို့ ဆေးဆိုင်ကို သွားနေစရာ မလိုယုံမက ဆေးဆိုင်ကနေ အိမ်တိုင်ယာရောက် လာပို့ပါမယ်။
ဓါတ်မှန်ကိုလည်း ကွန်ပြူတာမျက်နှာပြင်မှာ အချိန်မရွေး ကြည့်နိုင်ပါတယ်။ ဆေးရုံထဲ တနေရာက တနေရာ သယ်ရ-သွားရချိန် နည်းစေအောင် လေစုပ်အား-လေဟာနယ်စနစ် Pneumatic chutes ကို အသုံးပြုထားလို့ လူနာရဲ့ သွေးနမူနာ စတာတွေကို လူနာစောင့်က ဓါတ်ခွဲခန်းတို့ သွေးဘဏ်တို့ကို သွားပို့ပေးစရာ မလိုတော့ပါ။
ဆရာဝန်နဲ့တွေ့ဘို့ ရက်ချိန်းကိုလည်း (အွန်လိုင်း)ကနေ လုပ်နိုင်တယ်။ ဆရာဝန်၊ သူနာပြု ခွင့်ရက်ကအစ ကွန်ပြူတာ (အွန်လိုင်း)မှာ ရှိနေတယ်။
ရောဂါရှာတာ၊ ကူသမှုပေးတာတွေမှာလည်း တိုးသည်ထက် တိုးတက်လာပါတယ်။ Digital x-rays, 64 slice CT-scan, MRI, PET-Scan နဲ့ ၄၀၀၀ သော ဓါတ်ခွဲစမ်းသပ်နည်းတွေကို ပိုမိုတိကျတဲ့ အဖြေရစေကာမို့ ထိရောက် မြန်ဆန် လှပါတယ်။ လူ့အမှားဆိုတာလဲ နည်းစေပါတော့တယ်။ Cutting-edge technologies နည်းပညာတွေ ရယူ သုံးစွဲထား နိုင်လို့ပါ။
ဗိုက်ဖွင့်-ရင်ဖွင့် ခွဲစိတ်နည်းနေရာမှာ ဒါးရာ အနည်းဆုံးနဲ့ အတွင်းထဲ ထည့်ကရိယာတွေ သုံးလာပါတယ်။ ခွဲစိတ်ဆရာဝန်များဟာလည်း လူနာတင်ထားတဲ့ ကုတင်ဘေးမှာ မဟုတ်ဘဲ၊ ခိုင်းသလိုလုပ်ပေးမဲ့ (ရိုးဘော့) စက်ရုပ်တွေကို အမိန့်ပေးတဲ့ ကွန်ပြူတာအနားမှာ ထိုင်ရပါတယ်။ လူ့အမှားနည်း၊ လူ့အသား ထိခိုက်မှုလည်းနည်း၊ ပိုးအ၀င်လည်း နည်းစေပါတယ်။ အပျောက်လည်း မြန်ဆန်၊ လူနာ့အဖို့ အနာလည်းသက်သာ၊ သွေးထွက်နည်းပြီး၊ အိမ်မြန်မြန် ပြန်နိုင်စေပါတယ်။ ကောင်းမှကောင်း ဆိုတာမျိုးပေါ့။
လေပြွန်ထဲကရိယာထည့်ကြည့် စစ်ဆေးတဲ့ Endoscopy and Bronchoscopy အတွက် လူနာကို ဆေးရုံတင်ဘို့ မလိုတော့ပါ။ အရင်က တပါတ်စာအလုပ်တွေဖြစ်ကြတဲ့ သည်းခြေအိပ်ထုတ်တာ၊ အူအတက်ထုတ်တာ၊ သွေးလွှတ်ကြော စစ်ဆေးတာ၊ သွေးလွှတ်ကြော ကျဉ်းတာကို ကုတာတွေဟာ တနေ့ထည်းပြီး ကိစ္စတွေသာ ဖြစ်လာပါတော့တယ်။
ဆေးရုံအတွင်းဒီဇိုင်းကိုလည်း (ဖိုက်စတား) ဟော်တယ်တွေလို Aesthetic Interiors နည်းတွေနဲ့ ပြုပြင် တည်ဆောက် ထားလို့ လူနာအဖို့ ကိုယ့်အိမ်မှာ နေနေရသလို ခံစားစေအောင် လုပ်ပေးတားပါတယ်။ အမြင်၊ အထိအတွေ့၊ အနံ့၊ နဲ့ စိတ်ခံစားမှု လေးမျိုးကို အဲလိုနေအောင် လုပ်ထားတာပါတဲ့။
လီယိုနာဒို-ဒါဗင်ချိ၊ အိုက်ဆက်-နူတန် တို့ခေတ်က စခဲ့တဲ့ (ကာလာ သီအိုရီ) တွေ အခြေခံပြီး၊ အရောင်တွေရဲ့ လူ့စိတ်အပေါ်လွှမ်းမိုးမှု သဘောတရားကို အသုံးပြုတာလို့ ဆိုပါတယ်။ ဆေးရုံဆိုရင် ထုံးစံရိုးရာ အဖြူရောင်အစား အရောင်နုကလေးတွေ သုတ်ခြယ်လာပါတယ်။ ကလေးလူနာဆောင်၊ သားဖွါးမီးယပ်ဆောင်တွေဆိုရင် အရောင်ကို ပိုဂရုစိုက်ရပါတယ်။ Loud colors ဆိုတဲ့ အရောင်စိုစို၊ အရုပ်ထင်းထင်း ပန်းချီရုပ်တွေ ရေးဆွဲထားပါတယ်။
အပြင်လှမ်းကြည့်လိုက်ရင်လဲ စိမ်းစိုနေမယ်။ ကလေးတွေ ကစားဘို့ နေရာ-ပစ္စည်းတွေလဲ ထားတယ်။ ဆေးရုံအဆင်း (ဆူဗီနာ)လက်ဆောင်ဝယ်သွားဘို့ ဈေးဆိုင်ကန္နားများလည်း ထားပေးပါတယ်။
ကိုင်း ရောဂါဖြစ်ချင်စရာ ဆေးရုံတက်ချင်စရာ ဘယ့်လောက် ကောင်းပါသလဲ။ မစည်ကားအပ်သော အရပ်တွေထဲမယ် ဆေးရုံဆိုတာလဲ ပါမယ်။ အခုလို ဆေးရုံမျိုးတွေမှာ လူသိပ်စည်မယ်တော့ မထင်ပါ။ ဈေးကြီးလှလွန်းလို့။
ဒီလို ဆေးရုံကြီးမျိုးတခု ကုန်ကျစရိတ်ဟာ RHC ခေါ်တဲ့ ကျေးလက်ကျန်းမာရေးဌာန ၁၀၀ မကကို တိုးတက်အောင် လုပ်ပေးနိုင်ပါလိမ့်မယ်။ ဒီလိုဌာနမျိုးမှာတော့ လူစည်စေချင်ပါတယ်။
အိတ်ခ်ျအိုင်ဗွီပိုး ပွားမှုကို ရပ်တန့်စေတဲ့ အေအာတီ ဆေးကို လိုအပ်သူတွေ ပိုမို လက်လှမ်းမီ ရရှိနိုင်ရေးအတွက် နယ်စည်းမခြား ဆရာဝန်များအဖွဲ့က ဆောင်ရွက်နေမှုကို မေးလ်ကနေ တစ်ဆင့် သတင်းရလို့ ပြန်မျှ လိုက်ပါတယ်။
ဒီအကြောင်းတွေကို အသေးစိတ် သိချင်ရင် ဒီ စာမျက်နှာမှာ ဖတ်ရှုလို့ ရပါတယ်။
ပါဝင်ကူညီချင်တယ် ဆိုရင် ဒီစာမျက်နှာမှာ ကိုယ့်နာမည်၊ မေးလ်လိပ်စာနဲ့ အေအာတီဆေး ထုတ်လုပ်နေတဲ့ ဆေးကုမ္ပဏီတွေကို နှစ်ဦးနှစ်ဖက် အကျိုးများစေမယ့် UNITAID Patent Pool ထဲ ပါဝင်ဖို့ အတွက် တွန်းအားပေးနိုင်ပါတယ်။
သူတို့ရဲ့ ဆောင်ရွက်ချင်တွေ အကြောင်း ဗီဒီယိုနဲ့ ရှင်းပြထားတာကို ဒီမှာ ပြန်တင်ပေးလိုက်ပါတယ်။
Labels: Communicable disease, HIV/AIDS, NGO
HIV/ AIDS နဲ့ ပတ်သက်လို့ ခက်ခဲလှတဲ့ ကိစ္စတွေထဲက တစ်ခုက တစ်ဖက်က နောက်ထပ် ရောဂါပိုး ပြန့်ပွားမှုတွေ များမလာအောင် ထိန်းချုပ်နိုင်ဖို့ ကာကွယ်ရေး ဆိုင်ရာ အသိပညာတွေကို ပေးရသလို တစ်ဖက်ကလည်း ရောဂါပိုးနဲ့ နေထိုင်ရသူတွေ ခွဲခြား ဆက်ဆံ မခံရအောင် နာမည်ဆိုး သတ်မှတ် မခံရအောင် ကြိုးစားနေရခြင်းပါ။
ကုလို့ မပျောက်တဲ့ ရောဂါ၊ သေမှာပဲ လို့ ပြောခဲ့၊ ပညာပေးခဲ့မိလို့ ရောဂါပိုး ရှိသူတွေကို အန္တရာယ် ပြုခံခဲ့ရတဲ့ သာဓကတွေ ရှိခဲ့ပါတယ်။
တခြား နာတာရှည် ရောဂါလိုပဲ။ ရောဂါပိုးနဲ့ ရှင်သန် အသက်ရှည် နေလို့ ရပါတယ်လို့ ပြောပြန်တော့ အစွန်းရောက်သူတွေက “ ကာကွယ်ဖို့ မလိုတော့ဘူးလား ” လို့ ယူဆကြပြန်တယ်။
ရောဂါပိုးနဲ့ နေထိုင်ရသူတွေထဲမှာ အပြုအမူပိုင်းဆိုင်ရာမှာ အပြစ်ပြောစရာ လုံးဝ မရှိတဲ့ ကလေးငယ်တွေ၊ အိမ်ရှင်မတွေ၊ အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးတွေလဲ ပါနေတာမို့ အပြုအမူတွေကို အပြစ်ပြောဖို့လဲ ခက်ပါတယ်။
တကယ်ကတော့ ရောဂါပိုး ကူးစက်မှာကို ကြောက်ရွံ့ရင် ရောဂါပိုး ရှိသူတွေကို ရှောင်ရမှာ မဟုတ်ပါဘူး။
ရောဂါပိုး ကူးစက်စေနိုင်တဲ့ အပြုအမူတွေကို ရှောင်ကြဉ်ပြီး ကိုယ့်ကိုယ်ကို ထိန်းသိမ်းနေထိုင်ရမှာ။
အိတ်ခ်ျအိုင်ဗွီပိုး ကူးစက်ပုံ ကူးစက်နည်း အဓိက နည်းလမ်း သုံးခုကို အခါခါ ကြားဖူးပြီးသား ဖြစ်မှာ ဖြစ်ပေမယ့် သတိရအောင် ထပ်ပြောပါရစေ။
- အကာအကွယ်မဲ့ လိင်ဆက်ဆံတာ (စအို၊ ပါးစပ်၊ လိင်အင်္ဂါ စတဲ့ နည်း အားလုံး)
- သွေးကနေ တစ်ဆင့် ( သွေးပေနေတဲ့ ချွန်ထက်တဲ့ ပစ္စည်းတွေကို မျှသုံး ပေါင်းသုံး ရောသုံး ရာကနေလဲ ကူးနိုင်တယ် .. ဥပမာ - ဆေးထိုးအပ် မျှသုံးတာ)
- ကိုယ်ဝန်ဆောင် မိခင် ၊ နို့တိုက်မိခင်ကနေ ကလေးကို ကူးစက်တာ
ရောဂါပိုးက အရေးကြီးသလား ?
တကယ် ဆေးသောက်နေရတဲ့ သူတွေကို မေးကြည့်ပါ။
ဆေးရဖို့ ခက်သလို၊ ဆေးရပြီးတဲ့ အခါမှာလဲ ဘေးထွက် ဆိုးကျိုးတွေကို အလူးအလဲ ခံရတာ ဘယ်လောက်ခက်တယ် ဆိုတာ ပြောရင် ပိုးရှိပြီးသား သူတွေကို စိတ်ဓာတ်ချ သလို ဖြစ်မလား။
မကြာသေးခင်က UNAIDS က ထွက်လာခဲ့တဲ့ ကြေငြာချက်ကလေးမှာ အခုအချိန်မှာ အိတ်ခ်ျအိုင်ဗွီပိုးနဲ့ နေထိုင်သူ လူလေးသန်းကျော်က အိတ်ခ်ျအိုင်ဗွီပိုး ပွားမှုနှုန်းကို ရပ်တန့် စေနိုင်တဲ့ အေအာတီ ဆေးကို ရရှိပြီ ဖြစ်ပါသတဲ့။ ဒါက တစ်ကမ္ဘာလုံး အတိုင်းအတာနဲ့ ကြွယ်ဝမှု အလယ်အလတ် ရှိတဲ့ နိုင်ငံတွေနဲ့ ဆင်းရဲတဲ့ နိုင်ငံတွေကို ကြည့်ပြီး ပြောထားတာပါ။ အဲဒါက ပြီးခဲ့တဲ့ နှစ်ကထက် စာရင် ၃၆% တက်လာတာဖြစ်ပြီး ပြီးခဲ့တဲ့ ငါးနှစ်ကာလနဲ့ နှိုင်းယှဉ်ရင် ဆယ်ဆတောင် တက်လာတာ ဖြစ်ပါသတဲ့။
ဒါပေမယ့် ဒါက အေအာတီ ဆေးကို လိုအပ်နေသူတွေရဲ့ ၄၂% ပတ်ဝန်းကျင်ပဲ ရသေးတာ။
အဲဒီတော့ ဆေးမရသေးတဲ့သူ ၅၈% ပတ်ဝန်းကျင် ကျန်နေသေးတယ်။
ပြီးတော့ ယခု လက်ရှိ အခြေအနေ အရ အေအာတီဆေး နှစ်ယောက် ရတိုင်းမှာ အသစ် ထပ်ပြီး ပိုးကူးခံလိုက်ရတဲ့ သူက ငါးယောက်နှုန်းလောက် ဖြစ်နေတယ်လို့လဲ UNAIDS က ပြောပါတယ်။
ဒီနှုန်းအတိုင်း သွားနေရင် ဆေးက လုံလောက်မှု ရှိပါ့မလား။
ပုံမှန် ဆေးနဲ့ မနိုင်တဲ့ ပိုးအမျိုးအစားတွေ ရှိနေသေးတာကို မပြောဘဲ ထားမယ် ဆိုရင်တောင် အားတက်စရာ အများကြီး မရှိလှသေးဘူး။
ဒီလို ဆေးတွေ ရဖို့၊ ပေါ်လစီတွေ ပြောင်းဖို့ကို ကြိုးစားတဲ့ သူတွေက အသေအကြေ ကြိုးစားနေကြရချိန်မှာ လူတိုင်းလူတိုင်းကလဲ ကိုယ့်တာဝန် ကိုယ် ယူနိုင်သလောက် ယူသင့်တယ်လို့ ယူဆမိတယ်။
ကျွန်မ ပြောလေ့ရှိတာကတော့ ပိုးရှိသူ တစ်ဦးက နောက်တစ်ယောက်ကို ကူးစေခဲ့ရင် ကိုယ့်အတွက် ဆေးရနိုင်ခွင့် တစ်ယောက်စာ ပိုနည်းသွားအောင် လုပ်တာနဲ့ မတူဘူးလားလို့။
အိတ်ခ်ျအိုင်ဗွီပိုး ရှိသူနဲ့ မရှိသူတွေ အိမ်ထောင်ပြုထားကြတာတွေ ရှိပါတယ်။
တော်ရုံ မေတ္တာတွေနဲ့ ဟုတ်ကြမယ် မထင်ပါဘူး။
ကျွန်မ သိတဲ့ စုံတွဲကလေးကတော့ ကာယကံရှင် ပိုး ရှိသူ အမျိုးသားလေးက သူ့အမျိုးသမီးလေးအတွက် အမြဲတမ်း စိုးရိမ်သောက ရောက်နေရတယ်။
သွေးစစ်တိုင်း သူ့မှာ ကူးပြီလားလို့ ရင်တထိတ်ထိတ်နဲ့။
ဒါကို အားပေးတိုက်တွန်းမှာ မဟုတ်သလို၊ ကန့်ကွက် အပြစ်တင်မှာလဲ မဟုတ်ပါဘူး။
Comment မှာ ဖြေထားသလိုပဲ နှစ်ယောက် စလုံး ကိုယ့်အန္တရာယ်တွေကို သေသေချာချာ သိနားလည်ဖို့ လိုပါတယ်။
ပြီးတော့ အဲဒါတွေကို ဘယ်လို ကာကွယ် ရမယ် ဆိုတာကိုလဲ သေသေချာချာ သိနားလည်ထားဖို့ လိုပါတယ်။
အိတ်ခ်ျအိုင်ဗွီ၊ အေအိုင်ဒီအက်စ်နဲ့ ပတ်သက်တဲ့ ပို့စ်တွေ ဒီမှာ ရှိပြီးသားမို့ အများကြီး မပြောချင်တော့ပါဘူး။
ပိုနားလည်ချင်ရင် အဲဒီအကြောင်းအရာနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ စာတွေကို များများ ဖတ်စေချင်ပါတယ်။
အသစ်တွေ့လာတဲ့ နည်းလမ်းတွေ၊ ကာကွယ်ဆေးတွေ၊ ပိုးသတ်ဆေးသုံးတာတွေကို သုတေသန ပြုလုပ်သူတွေက အကျိုးသက်ရောက်မှု အတိုင်းအတာ တစ်ခုအထိ ရှိတယ်လို့ပဲ ပြောနိုင်တာပါ။
ကာကွယ်နိုင်တဲ့ ရာခိုင်နှုန်းတွေက နည်းပါးနေပါသေးတယ်။
ယူဂန်ဒါ သမ္မတ ပြောဖူးတဲ့ စကားလေးကိုပဲ ပြန်ပြောရမယ် ထင်တယ်။
“ တကယ်လို့ သင့်လက်ကို ခြတောင်ပို့ထဲ သွားထည့်လို့ မြွေကိုက်ခံရတယ်ဆိုရင် ဘယ်သူ့ အပြစ်လဲ” တဲ့။
ပြောချင်တာက ခြတောင်ပို့ တိုင်းထဲမှာ မြွေရှိချင်မှ ရှိမှာပါ။
ဒါပေမယ့် မြွေရှိနိုင်တယ် ဆိုတာကိုတော့ သဘောပေါက် နားလည်ထားသင့်ပါတယ်။
ပြီးမှ မြွေကိုက်ခံရချင်လဲ ခံရပါစေ ဆိုရင်တော့လဲ မတတ်နိုင်ဘူးပေါ့လေ။
အိတ်ခ်ျအိုင်ဗွီ အေအိုင်ဒီအက်စ်နဲ့ ပတ်သက်လို့ မှန်ကန်တဲ့ သတင်းအချက်အလက်တွေ အားလုံး လူတိုင်း လူတိုင်း သိခွင့် နားလည်ထားခွင့် ရှိပါတယ်။
ဒါမှ ကိုယ့်ကိုယ်ကို ကာကွယ်နိုင်မှာ။
Reader's Digest Sept.2004, As Simple As ABC by John Dyson
Labels: Behavior change communication, Communicable disease, HIV/AIDS